"Laag Ayay Barcelona Igaga Saartay Kooxdeeda, Xanuunkana Waan La Dareemay Messi" Luis Suarez Oo Xalay Si Faahfaahsan Uga Hadhay Ka Tegistii Barcelona & Xanuunka Haysta Messi - Gool24.Net
“Laag Ayay Barcelona Igaga Saartay Kooxdeeda, Xanuunkana Waan La Dareemay Messi” Luis Suarez Oo Xalay Si Faahfaahsan Uga Hadhay Ka Tegistii Barcelona & Xanuunka Haysta Messi
Luis Suarez ayaa markii ugu horreysay shaaciyey in qasab lagaga saaray Barcelona, isla markaana uu dareemay xanuunka bixitaanka si la mid ah Lionel Messi oo isaguna bannaanka soo dhigay sida uu uga xumaaday in saaxiibkii laga caydhiyo Kooxda.
Suarez oo xalay gool u dhaliyey xulka qaranka Uruguay oo kulan ka tirsan isreeb-reebka Koobka Adduunka ee 2022 ku waajahay Chile oo 2-1 ay kaga adkaadeen, ayaa waxa uu caddeeyey in si xun ay ula dhaqantay Barcelona, isla markaana laag lagaga saaray naadiga oo uu doonayay inuu sii joogo.
Lionel Messi ayaa aad uga xumaaday go’aankii ay Barcelona ka qaadatay Luis Suarez oo ay kansashay qandaraaskii ay kula jirtay, waxaana farriin uu bishii hore ku daabacay bartiisa bulshada uu ku yidhi: “Waxaad u qalantay in si habboon laguu sagootiyo, sababtoo ah, waxaad ka mid tahay ciyaartoyda ugu muhiimsanaa taariikhda kooxda. Waxaad ahayd qof guulo waaweyn gaadhsiiyey kooxda iyo naftiisaba. Umaad qalmayn in sidaa laguu tuuro. Laakiin runta ayaa waxay tahay in heerkan oo kale aanay aniga waxba layaab igu ahayn.”
Luis Suarez oo markii ay dhamaatay ciyaartii ay xalay 2-1 kaga adkaadeen Chile la hadlay warbaahinta ayaa isaguna qiray in si xun loola dhaqmay, waxaanu yidhi: “Lamaan yaabin hadalka Messi, sababtoo ah, si aad u wanaagsan ayaan u garanayaa. Waxaan ogahay xanuunka uu dareemay, aniguna sidoo kale waan dareemay.
“Wuxuu dareemay in laag la igaga saaray kooxda, waxaana jiray siyaabo kale oo aniga igu habboonaa oo aan kooxda kaga tegi karayay. Waxa aanu wada-joognay lix sannadood, anigana sidiisa oo kale (Messi) ayay ii dhibtay. Waxa aan u arkaa inuu yahay saaxiibkay, isaguna wuu ogyahay sida aanu u dhibaatoonay.
“Qoyskaygu waxay doonayeen inay arkaan anigoo faraxsan. Waxa jira waxyaabo layaab lahaa Barcelona, sida inay kuu dirtay inaad meel gaar ah ku tababarato iyadoo sababtu tahay inaan la tixgelinayn inaad u ciyaari doonto..
“Waxyaabaha noocan oo kale ayaa xumaan i geliyey, waxaanay qoyskaygu arkeen inay saamayn igu yeelatay, waxay igu dhiirigeliyeen inaan fursaddayda qaato. Markii ay Atletico i soo dalbatay, waqti ba iskamaan dayicin. Waxa aan ka faa’iidaystay waxyaabo badan, farxad ayaanan ku dareemayaa Atletico.”
Luis Suarez ayaa Atletico Maedrid u saftay kulankiisii ugu horreeyey laba maalmood kaddib markii uu Barcelona uga soo wareegay, waxaana ciyaartaas uu u dhaliyey laba gool iyo caawin uu raaciyey.